स्वास्थ्य तथा जीवनशैली Archives - बडिमालिका खबर
काठमाडौं — गर्भावस्थामा केही जटिलता आउन सक्छ । त्यसैमध्येको हो, थाइराइड पनि । गर्भावस्थामा थाइराइड भएमा के हुन्छ ? गर्भको बच्चामा कुनै जोखिम हुनसक्छ ? थाइराइड भएको अवस्थामा जन्मिने बच्चा अशक्त हुन सक्छन् ? यस अवस्थामा थाइराइड भएमा कस्ता विकल्प अपनाउन सकिन्छ ? यिनै विषयमा थाइराइड रोग विशेषज्ञ डा. मधु पाण्डेसँग गरेको कुराकानी : थाइराइड […]
काठमाडौं — १९ औं राष्ट्रिय धान दिवस आज मनाइँदै छ । यो वर्ष ‘धान रोपौं, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनौं’ नाराका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन लागिएको हो । दिवसको अवसरमा देशभर रोपाइँ लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । वि.सं २०६१ सालमा विश्वका ४३ राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष घोषणा गरेपछि नेपालमा वि.सं २०६१ मंसिर २९ […]
बुढिगंगाले बिद्यालयमा सेनेटेरी प्याड वितरण गरेन्, नगरपालिकाको लापरबाही
पदम सि‌ंह– बाजुराको बुढिगंगा नगरपालिकाले बिद्यालयमा निशुल्क वितरण गर्ने सेनेटेरी प्याड यो आर्थिक बर्षको वितरण गरेको छैन् । बुढिगंगा नगरपालिकाको चरम लापरबाहीका कारण सरकारले निशुल्क गरेको सेनेटेरी प्याड बिद्यालयमा नदिएको पाईएको हो । आर्थिक बर्ष २०७८–७९ का मा बुढिगंगा नगरपालिका निशुल्क सेनेटेरी प्याड वितरणका लागि २६ लाख ५० हजार रहेको थियो । उक्त रकम असार […]
काठमाडौं — मधुमेहका बिरामीले यो खान हुँदैन, त्यो खान हुँदैन हामीले धेरै सुन्दै आएका छौं । गुलियो त मधुमेहको बिरामीका लागि मन्द विष नै हो यो पनि हामीले सुनेका छौं । यस्तोमा गुलियो फलफूल पनि मधुमेहको बिरामीको लागि हानिकारक हुन सक्ला । तर डाक्टरहरुले फलफूल त स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो भनिरहेका हुन्छन् । अहिले आँपको […]
सेती प्रादेशिक अस्पतालले विभिन्न पदका लागी ३५ जना चिकित्सकको माग
बाजुरा — धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालले विशेषज्ञ चिकित्सकदेखि मेडिकल अधिकृतसम्मको लागी सूचना प्रकाशित गरेको छ । शुक्रबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै अस्पतालले विभिन्न पदका लागी ३५ जना चिकित्सक माग गरेको हो। उक्त जनशक्तिलाई करार सेवामा माग गरेको हो। अस्पतालले इच्छुक उम्मेदवारबाट १५ दिनभित्र आवेदन आव्हान गरी सक्नु प्रर्ने छ ।
शुक्रबार सन्तोषी माताको पूजाआराधना गर्नुहोस्
काठमाडौँ– हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार प्रत्येक दिनको महत्त्व फरक छ। यही फरक महत्त्वलाई बुझ्न सके दैनिकी सहज बन्नेछ। आज शुक्रबार। हिन्दू धर्मावलम्बीले आजको दिन शुक्रका साथै सन्तोषी माता र वैभवलक्ष्मीको पूजाआराधना गर्दछन्। साथै यस दिनमा लक्ष्मी माताका अवतार अन्नपूर्णेश्वरी माता र दुर्गा भवानीको पनि पूजा गरिन्छ। माता लक्ष्मीको व्रत बसी विधिवत रुपमा पूजा आराधना गर्नुपर्ने मान्यता […]
सुदूरपश्चिममा फेरि देखिन थाल्यो कोरोना, आज ९ जनामा संक्रमण
धनगढी– पछिल्लो केही दिनयता सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस संक्रमितहरु फेला पर्न थालेका छन्। आज बिहीवार मात्रै प्रदेशमा ९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय दीपायलले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ३०७ जनाको एन्टिजेन र २१ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा आज ९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा २१ जनाको नमूना परीक्षण गर्दा ६ […]
पोखरामा पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल
पोखरा — पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएको छ। काठमाडौं र पोखराका चिकित्सकहरूको टोलीले एक ५० वर्षीय महिलामा मिर्गौलाको प्रत्यारोपण सफल भएको हो । कास्कीकी ती ५० वर्षीय महिला करिब ५ मिर्गौलाको बिरामी थिइन् र उनले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै डायलासिस गरिरहेको निर्देशक भरत खत्रीले जानकारी दिए […]
कुकुरले टोक्नासाथ रेबिज लाग्छ ?
काठमाडौं — रेबिज रोगको बारेमा हामीले धेरै सुनेका छौं । रेबिजको खोप सजिलै उपलब्ध हुने भएकाले पनि अन्य रोगजस्तो यसको विषयमा मानिसहरूले त्यति चासो दिएको पाइँदैन । तर यसको खोप उपलब्ध हुनु भन्दा पहिले रेबिजको कारण जति व्यक्तिको मृत्यु हुन्थ्यो त्यो संख्यामा भने कमी आएको छैन । यसको कारण भनेको रेबिजको बारेमा समाजमा धेरै भ्रम […]
सहरमा भन्दा गाउँमा किन बढी चट्याङ पर्छ ?
वर्षायाममा चट्याङ कहिले र कहाँ पर्छ टुंगो हुँदैन । त्यसैले चट्याङबाट कसरी जोगिने भन्ने कुरामा खासै सतर्कता अपनाएको पाइँदैन । जबकि चट्याङले बर्सेनि मान्छेको ज्यान लिने गरेको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकमा २०७७ वैशाखदेखि २०७९ जेठ ३० गतेसम्म चट्याङका ५१५ घटना भएको अभिलेख छ । त्यसमा १५२ जनाले त ज्यान नै गुमाएका छन् । यस […]
बालबालिकालाई छालाको एलर्जी भएमा के गर्ने ?
बालबालिकाको छाला निकै संवेदनशील हुन्छ । सानो लापरवाहीले पनि उनीहरुको छालामा गम्भीर समस्या आउन सक्छ । विशेषगरी गर्मीयाममा बालबालिकाको छालामा एलर्जीको समस्या देखिने गर्छ । छालामा समस्या देखिनुमा विभिन्न कारण हुनसक्छ । यसतर्फ अभिभावक सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ । छालामा के कारणले एलर्जी हुन्छ ? यसबाट बच्ने उपाय यस्ता छन् । एलर्जी हुने कारण छाला […]
बाजुरा जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइयो
बाजुरा–बाजुरामा जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रिय योग मनाइएको छ । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र बाजुराको आयोजनामा बाजुराको सदरमुकाम मार्तडी योग दिवस मनाइएको आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रकी कर्मचारी नर्मदा कुवरले वताएकि छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश चन्द अधिकारीको अध्यक्षतमा सदरमुकाम मार्तडी योग दिवस मनाइएको हो । मानवताको लागि योग भन्ने नाराका साथ बाजुरा जिल्लामा मनाइएको हो । जिल्ला आयुर्वेद […]
शिशुको टाउको काटेर गर्भमा छोडिदिएपछि…
पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तको ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीले एक नवजात शिशुको टाउको काटेर आमाको पेटभित्रै छोडिदिएपछि ३२ वर्षीया महिलाको ज्यान जोखिममा परेको छ । उक्त घटनाबारे छानविन गरी दोषी पत्ता लगाउन सिन्ध सरकारले मेडिकल जाँच बोर्ड गठन गरेको छ । ‘थरपार्कर जिल्लाको दूर गाउँकी हिन्दू महिला पहिले आफ्नो क्षेत्रको ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र (आरएचसी) गएकी थिइन् । […]
अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइँदै
मानव जीवनका लागि योग भन्ने आह्वानसहित अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हरेक वर्ष जुन २१ तारिखका दिन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले सन् २०१४ मा गरेको निर्णयअनुसार सन् २०१५ जुन २१ देखि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन थालिएको हो […]
अमेरिकाले दियो २२ लाख मात्रा कोरोना खोप
अमेरिकाले करिब २२ लाख मात्रा कोरोनाविरूद्धको खोप नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। ती खोप पाँच वर्षदेखि ११ वर्षका बालबालिकालाई प्रयोग गर्न मिल्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म अमेरिकाले नेपाललाई प्रदान गरेको फाइजर खोपका २२ लाख ६० हजार मात्रा र जोन्सन एन्ड जोन्सनको एकल मात्रा खोप १५ लाख मात्राको परिमाणमा थप गरिने जनाइएको छ। […]
हैजाका बिरामी भेटिएको पुष्टि
काठमाडौं — काठमाडौंमा हैजाको विरामी भेटिएको पुष्टि भएको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुमा २ जेठमा भर्ना भएका दुई जना विरामीमा हैजा रोग पुष्टि भएको हो । १८ र २३ वर्षका उनीहरु काठमाडौं महानगरपालिका–२८ बागजारमा बसोबास गर्दै आएका एउटै परिवारका सदस्य हुन् । उनीहरुको टेकुमै उपचार भइरहेको छ । गर्मी तथा वर्षायाममा […]
बालबालिकालाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाइने
आगामी ९ असारदेखि मधेश प्रदेशसहित देशभरि ५ देखि ११ वर्ष उमेरका बालबालिकालाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ । पहिलो चरणमा देशका २७ जिल्लामा सञ्चालन हुने खोप कार्यक्रम अन्तर्गत मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र पर्सा जिल्लालाई समेटिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय मधेश प्रदेशका निर्देशक विजयकुमार झाले जानकारी दिए । प्रदेशमा ५ देखि ११ वर्ष […]
मर्निङ वाक गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पाँच कुरा
स्वस्थ र फिट रहन खानपानका साथै दैनिक व्यायामको पनि उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ । अहिले स्वास्थ्यका लागि भन्दै बिहान मर्निङ वाक जाने प्रचलन बढ्दै गएको छ । गाउँमा उकाली ओराली गरिरहनुपर्ने भएकाले मर्निङवाक आवश्यक नभए पनि सहरमा बिहान हिंड्डुल गर्ने चलन बढेको छ । शारीरिक व्यायामले मान्छेलाई बाहिरी रुपमा मात्रै स्वस्थ बनाउँदैन फुर्तिलो समेत बनाउँछ । […]
तराइमा देखीने कालाजारका बिरामी बाजुरा पनि भेटिए
बाजुरा– तराईका जिल्लामा देखिने कालाजार रोग बाजुरामा पनि देखा पर्न थालेको छ । बाजुराको उत्तरी क्षेत्रका स्थानिय तहमा कालाजारका बिरामी भेटिएको बुढिनन्दा नगरपालिका स्वास्थ्य सह संयोजक ओमजङ्ग शाहिले वताएका छन् । स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका ३ बस्ने २ बर्षका कपुर लोवार अस्पताल बाजुरामा उपचार गर्न पुगे । त्यहाँ उनलाई प्रयोगशाला परिक्षण गर्दा कालाजार भेटिएको अस्पताल बाजुराले […]
आज चुरे दिवस : एकैदिन एक लाख बोटबिरुवा रोपिँदै
आज आठौं चुरे दिवस । नेपालमा चुरे संरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति छ । जस अन्तर्गत चुरे संरक्षणका कार्यक्रम हुन्छन् । दिवसका अवसरमा आज समितिले रुख र फलफूल प्रजातिका कम्तीमा एक लाख बोटबिरुवा रोप्ने भएको छ । असार महिना वृक्षरोपण महिनाको रुपमा मनाउँदै महिनाभर कम्तीमा पाँच लाख वृक्षारोपणको लक्ष्य लिइएको चुरे […]
खाली पेटमा आँप खानु हुन्छ ? बढ्न सक्छ सुगर र एसिडिटी
के तपाई रसिलो आँप देखेपछि आफूलाई रोक्न सक्नुहुन्न ? यदि तपाई आँपको पारखी हुनुहुन्छ भने कहिले र कति खाने भन्ने कुरा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । मेडिका अस्पताल राँचीका प्रमुख आहारविज्ञ डा. विजयश्री प्रसाद खाली पेटमा आँप खान नहुने बताउँछन् । किनभने यसले रगतमा चिनीको मात्रा छिटो छिटो बढाउँछ । एक ठूलो र काँचो आँपमा २२ देखि […]
कविता प्रतियोगीतामा बाजुराका राम बहादुर कटुवाल दाेस्राे स्थानमा
बझाङमा वडा अध्यक्ष चढेको जिप दुर्घटना चालक सहित ६ जना घाइते
बाजुराकाे जगन्नाथमा ट्याक्टर दुर्घटनामा परी ३ जना घाईते, अबस्था गम्भीर
बाजुरा : बुढिगंगा नगरपालिकाकाे स्थानिय तह निर्वाचन असार २३ गते हुने
फापरको पिठो पठाईदेउ आमा…………